Ukungena Kwamakhaya Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Indlu ye-log noma isakhiwo se-log yisakhiwo esakhiwe ngezingodo ezivulekile ezifakwa ngaphakathi emakhoneni ngokungena. Amalogi angazungezwa, ahlukaniswe ngesikwele noma aqoshiwe kwezinye izinto, kungaba okuthwethwe ngesandla noma okuncibilikisiwe. Igama elithi "i-log cabin" ngokuvamile lisho indlu encanyana, e-rustic log, efana nekhabethe lokuzingela ehlathini, elingase noma lingenawo ugesi noma amapayipi. Ukwakha izingodo kwakuyindlela yokwakha ejwayelekile kakhulu ezifundeni ezinkulu zaseSweden, eFinland, eNorway, eBaltic naseRussia, lapho kutholakala khona izihlahla ze-coniferous eziqondile nezinde, njengephayini kanye ne-spruce. Iphinde yasetshenziswa kabanzi ezakhiweni zomdabu e-Eastern Central Europe, e-Alps, eBalkan nasezingxenyeni ze-Asia, lapho kunezimo zezulu ezifanayo. Ezindaweni ezishisayo nezisentshonalanga zaseYurophu, lapho izihlahla eziqinile zihlala zithandwa khona, ukufakwa kwezinkuni kwakuthandwa esikhundleni salokho.